Daawo Quruxda iyo Bilicda Degaanka Calmadow Gobalka Sanaag” Qurba Joogey Dalkiina Dalxiis ku Macaan – Kismaayo24 News Agency
Daawo Quruxda iyo Bilicda Degaanka Calmadow Gobalka Sanaag” Qurba Joogey Dalkiina Dalxiis ku Macaan
by Tifaftiraha K24 31st December 2015 0235
Socdaal qaatay mudo ku dhow asbuuc ayaan ku tagay Deegaanka Calmadow oo hoos yimaada degmada Laasqoray ee Gobalka Sanaag, waxaa ii suurta gashay inaan u kuur galo nosha dadka iyo deegaanka.
Waxaa igu weheliyay gudoomiyihii hore ee gobalka Mudug Mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey oo ku caan baxay soo gudbinta quruxda iyo waxyaabaha gaarka u lee yihiin deegaanada Puntland mamusho.
Calmadow waa deegaan cilmo ahaan ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya, waxaa ku yaala dhowr tuulo, sidoo kale waa dhul dalxiiska ku wanaagsan waa dhul qabow ah oo dhulka ka sareeya wax badan, tuulooyinka sida Moon oo kale waxaa la ii sheegay inaysan mudo ku dhow labaatan cisho qoraxda laga arag sababtuna waa cilimada oo ah mid qabow cirkana daruuro isku camiraan.
Dhagayso:- Odayaasha Gobalka Baay oo ka cabanaya in xildhibaano ay gudbiyeen laga tagey oo aan lagu darin Baarlamaanka Koonfur Galbeed
Top News: Golaha Gurtida Somaliland oo mudo kordhin hal sano iyo 10 bilood ah u sameyey xukumadda Siilaanyo (Akhriso Warqadii Golaha Guurtida ka soo baxdey).
WARBIXIN XASAASI AH: PUNTLAND oo ka hadashay saameynta go’aankii ay ku mamnuucday Gaadiidka Koonfurta…
Dhageyso: Cudurka shuban biyoodka oo 50 ruux dad ka badan ku dilay deegaanka……